सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविपरीत किन जाँदैछिन राष्ट्रपति भण्डारी ? भयो यस्तो खुलासा — Sanchar Kendra
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविपरीत किन जाँदैछिन राष्ट्रपति भण्डारी ? भयो यस्तो खुलासा
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन किनारा नलाग्दै काठमाडौंको वसन्तपुरस्थित काष्ठमण्डपको उद्घाटन हुने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काष्ठमण्डपको उद्घाटन गर्ने तय भएको हो । अन्तरिम आदेश कायम रहेको र पुरानै मूर्ति पुनःस्थापना गर्नुपर्ने जनाउँदै सरोकारवालाले उद्घाटनको विरोध गरेका छन् ।
२०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त यो सम्पदा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण भएको हो । यस क्रममा पुरानो मूर्ति हटाएर नयाँ मूर्ति राखिएको थियो, जसको स्थानीय र सम्पदाविद्ले विरोध गर्दै आएका छन् । समितिले काष्ठमण्डपभित्रका गोरखनाथ र चारवटा गणेशका प्राचीन मूर्ति हटाएर नयाँ प्रतिस्थापन गरेको थियो ।
नयाँ मूर्ति प्रतिस्थापनविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा गत पुस २८ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले माघ ३ मा नयाँ मूर्ति नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । दामोदर न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ‘प्राचीन मूर्तिहरूको पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको देखिँदा पुराना मूर्ति विस्थापित गर्ने लगायतका कार्य नगरी प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू’ भनी आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश प्रतिकूल उद्घाटन गर्न लागेको भन्दै २० नं. वडा कार्यालयले समेत रोक्न माग गरेको छ । उक्त वडाका अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले पुनर्निर्माण समितिलाई पत्र लेख्दै अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । वडालाई जानकारी नदिई गर्न लागिएको उद्घाटनले गलत सन्देश जाने मानन्धरले बताए । ‘लोकार्पण कार्यलाई स्थगित गर्न र प्राचीन मूर्ति सोही ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उद्घाटन नगर्न माग गर्दै स्थानीयवासी र सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मीका तर्फबाट सोमबारै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र दर्ता गरेको स्थानीय तथा सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मी गणपति लाल श्रेष्ठले बताए ।
उनले काष्ठमण्डप भौतिक संरचना मात्र नभएर सभ्यता र नेवार संस्कृति पनि भएको जनाए । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न यसअघि पनि समितिलाई पत्राचार भएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर आदेशको अवज्ञा भयो । अहिले जबर्जस्ती उद्घाटन गरेर राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा पार्न खोजिएको छ । यो आपत्तिजनक छ ।’
समितिले पुराना मूर्ति चोइटिएकाले नयाँ राखेको दाबी गर्दै आएको छ । अभियानकर्मी श्रेष्ठले काष्ठमण्डप भौतिक संरचना मात्र नभई यहाँको मूर्ति पनि भएको बताए । ‘मूर्तिमा विवाद आउनु नै काष्ठमण्डपमा विवाद आउनु हो,’ उनले भने । चोइटिए पनि सक्कली मूर्तिलाई हटाएर अर्को राख्न नमिल्ने अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले बताए ।
‘केही हदसम्म बुढानीलकण्ठ र पशुपतिनाथको मूर्तिसमेत चोइटिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर विश्व सम्पदा क्षेत्र जस्तो संवेदनशीलले क्षेत्रमा पुरातत्त्व विभागलगायत सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको निकायबाट स्वीकृति नलिई यस्तो काम गर्नु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।’